[Wardegdega Sirculus ] Garguurte oo Ethiopia ku saxiixay inuu Turkey ka saaraayo Somalia iyo qodobo halisa ?
Friday December 30, 2016 - 23:41:22 in Wararka by Super Admin
Madaxweyne Hassan Sheikh oo saakay diyaarad looga qaaday Muqdisho lana geeyey magaalada Addisababa, wuxuuna kula soo kulmay Itoobiya iyo imaaraadka, isla galabtana Xamar lagu soo celiyey waxyaabaha uu soo saxiixay madaxweynaha waxaa kamid ah:-
1- Dawladda Turkey inaysan saldhig ka sameysan Somalia, lagana saaro dalka, kadib markii dalka laga saaro dekedda iyo Garoonka lagu wareejiyo UAE.
2- Ciidamada Amisom ee Burundi oo dhan 5500 in dalka ka baxaya, kalana jooga Mogadishu iyo Middle Shabelle lagu bedelo Ethiopian, Madaxtooyada, Dekedda iyo Garoonka Muqdisho la geeyo ciidamo Ethiopian.
3- in Dawladda Cusub Somalia Kamid noqon Akhwaanul muslimiin sida Farah Abdulkadir, Odowaa, Mahad Salad iyo xubnaha ay diidan tahay dawladda UAE.
4- In Dekedda Berbera lagu wareejiyo UAE, saldhig milateri kasameystaan, dhinaca baddana itoobiyaanka wax ka ilaaliyaan, maamulka dekedaa qeyb ka noqdaan.
5- Dekedda Kismaayo in lagu wareejiyo UAE.
6- in Dekedaha Soomaaliya oo imaaraadka maalgelinayo muddo 35 sano ah canshuur dhaaf wixii dowlada Ethiopia wadato uga degsato, sidoo Kalana dekedaha Emirate maal gelineyso ee Somalia ay ethiobia maamulka wax ku yeelato.